टिपिएस सुविधाको स्वागत – NepalayaNews.com
टिपिएस सुविधाको स्वागत
२३ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०५:५४
नेपालमा भूकम्प गएको सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालीहरुलाई लक्ष्य गरी टेम्पोररी प्रोटेक्टेड सेक्युरिटी (टिपिएस) को अवधि १८ महिना थप गर्नु स्वागतयोग्य छ । यसले सबैभन्दा पहिला त अमेरिकामा स्टाटसको समस्यामा परेका नेपालीलाई खुसी दिएको छ, आफ्नै समुदायकाहरुलाई सुविधाले राहत पुग्ने कुराले अमेरिकाका अरु नेपालीलाई पनि हर्षित पारेको छ । नेपालमै रहेका उनीहरुका आफन्तहरुमा त झन् ठूलो खुसीको बहार सञ्चार भएको छ । यसले पारिवारिक मिलन अवसर जो जुराएको छ ।
हामी नेपाली अमेरिका आएका छौं, किन ? सबैभन्दा पहिला त आफ्नै लागि र अर्काे परिवारका लागि । परिवारै नभए आफ्नै औचित्य पनि कहाँ रहन्छर ? जतिसुकै धनी र सफल मान्छेले पनि परिवारको महत्व दर्शाएकै हुन्छन् भने हामी त झन् साधारण व्यक्ति । हामीलाई झन् परिवारको महत्व धेरै छ । अर्काे कुरा नेपाली समाज एकलतामा भन्दा बहुलतामा विश्वास गर्छ र संयुक्त पारिवारिक संरचनामा रमाउँछ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले नेपालीहरुप्रति सदभाव देखाउनुलाई वास्तवमै दुखीरहेको घाउका लागि मलम दिनुजस्तै हो ।
बहाना भूकम्पकै भए पनि भूकम्पबाट प्रभावित नभएका नेपालको जिल्लाका बासिन्दाले पनि आफू बिनाकागजात अमेरिकामा रहँदाको सास्ती र गुम्फनबाट राहतको सास फेर्न पाउने अवसर मानवीय संवदेशनशीलताको तराजुमा निकै वजनदार छ । टिपिएस सुविधा थपका लागि भएको हस्ताक्षर अभियानमा १३ हजार जनाजतिको हस्ताक्षर संकलन हुनुबाटै यो विषय कति धेरैजनासँग सम्बन्धित र चासोको विषय हो भन्ने पुष्टि भएकै थियो । अन्ततः विविध प्रयासबाट यो अभियानले सफलता पायो र नेपालीलाई टिपिएस सुविधा प्राप्त भयो । यस अभियानमा सरिक सबैलाई धन्यवाद । सुविधा पाउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबैनीलाई बधाई र यस अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण अमेरिकी नागरिक तथा सांसदहरुलाई साधुवाद ।
लोक गायक प्रेमराजा महत दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण २३ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०५:५४
टिकटक र विच्याट प्रतिवन्ध गर्ने ट्रम्पको आदेश महत्वपूर्ण होइन– विज्ञ २३ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०५:५४
हङकङको स्वतन्त्रता खोसिनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अमेरिकाले लाममाथि लगायो प्रतिबन्ध २३ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०५:५४